Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNeville
EJamaica, ibraata ithetha ukunika intwana eyongezelelweyo kwaye unethemba lokuba uya kubuya. Yiloo nto kanye oya kuyifumana eBraata@ Little Bay-indawo eyongezelelekileyo, intuthuzelo, ubuhle obuninzi. Awuyi kukwazi ukuhlala kude. Ilungele ukudibana kosapho kunye nemitshato
Imi ngaphandle kwedolophu yembali yasePort Maria kunxweme olusemantla eJamaica, le villa entsha inombono omangalisayo wolwandle kwigumbi ngalinye. Inamagumbi amane okulala abanzi een-suite, ngalinye linebalcony yalo yabucala; kunye nendlu yesitudiyo ezimeleyo.
Le propathi intle kangaka iyafumaneka ukuze urente njengendawo yokuhlala yamagumbi ama-4, kunye nefulethi le studio (kuxhomekeke, ekufumanekeni).
Kukho ikhitshi elikhulu, elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nayo yonke into oyifunayo, indawo yokuhlala etofotofo kunye neyokutyela, kunye nethafa elipholileyo langaphandle elijonge echibini kunye neJacuzzi, apho unokungqengqa ngasemva kwisofa ejingayo kwaye ukhukuliseke kwisandi samaza. Cofa uye kuphahla olukhulu lweteyiphu ukuze ufumane iimbono ezimangalisayo kunye nempepho yolwandle.
Ukutya kunokubonelelwa ngeendleko ezongezelelweyo xa kuceliwe.
4.58 ·Izimvo eziyi-12
IPort Maria (eyayibizwa ngokuba yiPuerto Santa Maria ekuqaleni) likomkhulu laseSt Mary, kwaye yidolophu yesibini ukusekwa ngabemi baseSpain eJamaica. Indlu yeNkundla yasePort Maria kunye neCawa yasePort Maria yimizekelo emihle yembali yobukoloniyali etyebileyo. I-Rio Nuevo ekhangayo yindawo yedabi apho amaNgesi aloyisa iSpanish ukuze aphinde athabathe isiqithi ngo-1658. Kufuphi neOracabessa yidolophu entle engaselwandle, ekucingelwa ukuba igama layo livela kwiSpanish “oro de cabeza”, okanye intloko yegolide (intloko yegolide). Isalathiso ekukhanyeni kwayo kwegolide emva kwemini), kulapho umenzi weJames Bond u-Ian Fleming wakha khona ikhaya lakhe leGolden Eye. U-Ocacabessa kunye noJames Bond Beach bobabini babonisiwe kwiifilimu zeBond (uGqr No kwaye Phila kwaye uDie). I-Firefly, ikhaya eliphezu kwenduli elalikade lilawulwa ngumbhali wemidlalo yeqonga uNoel Coward, ngoku liyindawo yenkcubeko elilifa elineembono ezintle phezu kolwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Neville
Ndizakufumaneka ngomnxeba. Kuya kubakho abasebenzi abakhoyo kwi-24 hrs ngosuku